အတိုးအများဆုံးဘဏ်မှာ ငွေစုမယ် - Saving Deposit in Myanmar
6 Jan 2017 . 6:03 PM
ဘဏ်တိုးရတဲ့အပေါ်မှာ အခွန်မကောက်တော့ပါဘူးခင်ဗျာ။ ဘဝရှေ့ရှေးအတွက် စိတ်အေးချမ်းသာစွာငွေစုလို့ ရပါပြီ။ ဒါဆိုရင်တော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာဘယ်ဘဏ်ကအတိုးအများဆုံးပေးနေသလဲဆိုတာကို သိထားဖို့လိုပါတယ်။ (စုငွေ – Saving ကိုပြောတာနော်) စုတာတော့ကြာပြီ အတိုးဘယ်လိုတွက်ပေးမှန်းမသိသေးဘူးလား။ အခုမှစစုမယ်ဆိုရင်ရော ဘယ်လိုစုရမှာလဲ။ အိုကေပါခင်ဗျာ။ ဘဏ်စုငွေနဲ့ပက်သက်ပြီးသိထားသင့်သမျှကို ကျွန်တော်တို့အခရာက ရေးသားဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံကဘဏ်တွေရဲ့ စုငွေအတိုးနှုန်းတွေကိုလည်း အနည်းအများ အစဉ်လိုက်ရေးထားပေးတယ်နော်။
ငွေစုဘဏ်အပ်ငွေ (Saving Deposit) အကောင့်ဘယ်လိုဖွင့်မလဲ?
ကိုယ်ငွေစုချင်တဲ့ နီးစပ်ရာဘဏ်တစ်ခုခုကိုသွားပါ။ မှတ်ပုံတင်မူရင်းတော့လိုပါတယ်။ ဧည့်ကြိုကောင်တာကမိန်းကလေးတွေကို “စုငွေ (Saving) အကောင့်ဖွင့်ချင်တယ်” လို့ပြောလိုက်ပါ။ သူတို့ကဖော်ဖော်ရွေရွေနဲ့ပဲလိုက်လုပ်ပေးပါတယ်။ နာရီဝက်ထက်ပိုမကြာပါဘူး။ ပြီးရင်တော့သင့်နာမည်နဲ့ ငွေစုစာအုပ်လေးတစ်အုပ်ထုတ်ပေးပါမယ်။
တစ်ချို့ဘဏ်တွေက ၁၀၀၀ ကျပ်ကစစုလို့ရပေမယ့် တစ်ချို့ကျတော့ ၁၀၀၀၀ ကျပ်ကနေစစုမှရမှာပါ။ ဒါပေယ့်
ဘဏ်တွေအားလုံးတူတဲ့အချက်ကတော့ ဘဏ်စာအုပ်ထဲမှာအနည်းဆုံး ၁၀၀၀ကျပ်လက်ကျန်ထားရပါမယ်။
စုငွေ*အတိုးနှုန်း/၁၂ ဆိုတဲ့ပုံသေနည်းနဲ့တွက်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ စုငွေအတွက် အတိုးနှုန်းတွေက ၈.၂၅%, ၈.၅% နဲ့ ၈.၆% ဆိုပြီးတော့ ဘဏ်တွေအပေါ် မူတည်ပြီး ကွဲပါတယ်။
ဘယ်လိုတွက်ရမလဲဆိုတာကို ကမ္ဘောဇဘဏ်နဲ့ဥပမာထားပြီးတော့ပြောပါမယ်။ကမ္ဘောဇရဲ့အတိုးနှုန်းက ၈.၂၅% ပါ။
ကျွန်တော် ကမ္ဘောဇဘဏ်မှာ ၁၀၀,၀၀၀ (တစ်သိန်း) စစုတယ်လို့ဆိုပါစို့။
တစ်သိန်းအတွက် အတိုးနှုန်းဘယ်လောက်ရလဲဆိုတာကို ကျွန်တော်တွက်ပြပါ့မယ်။
စုငွေ = ၁၀၀,၀၀၀
အတိုးနှုန်း = ၈.၂၅% = ၈.၂၅/၁၀၀ = ၀.၀၈၂၅ ပါ။
စုငွေ*အတိုးနှုန်း/၁၂ = ၁၀၀,၀၀၀*၀.၀၈၂၅/၁၂ = ၆၈၇.၅ ကျပ်ပါ။
အဲ့ဒီတော့ တစ်သိန်းစုမယ်ဆိုရင် တစ်လကို ၆၈၇.၅ ကျပ်ရပါမယ်။ (ဘဏ်တွေက စုငွေကို တစ်နှစ်အပေါ်မူတည် ပြီးတွက်တာမို့ ၁၂ နဲ့စားရတာဖြစ်ပါတယ်။)
ဘဏ်အများစုက လစဉ် လဆန်း (၁) ရက်နေ့မှ (၅) ရက်နေ့အထိ သွင်းထားသောငွေရဲ့ လကုန်ရက်အတွင်း အနည်းဆုံးလက်ကျန်ပဏာဏအပေါ်မှာ အတိုးပေးတွက်ပေးလေ့ရှိပါတယ်။ (ဒါကတော့ ယေဘုယျပြောတာပါ။တစ်ချို့ဘဏ်တွေကကွဲလွဲမှုရှိပါတယ်)
ဘဏ်အားလုံးလိုလိုက အတိုးကိုသုံးလတစ်ကြိမ်ထုတ်ပေးပါတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့် မတ်လ၊ဂျွန်လ၊ စက်တင်ဘာလ နဲ့ ဒီဇင်ဘာလ ကုန်ရက်တွေမှာထုတ်ယူနိုင်မှာပါ။
(အောက်မှာ Group အလိုက်ဖော်ပြထားတယ်)
အတိုးနှုန်း 8.25% ပေးသောဘဏ်များ
(၁) ကမ္ဘောဇဘဏ် (KBZ Bank)
အမှတ် (၆၁၅/၁)၊ ပြည်လမ်း၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်။
ဖုန်း 1-538075, 1-538076, 1-538078
(၂) သမဝါယမဘဏ် (CB Bank)
အမှတ် (၃၃၄/၃၃၆)၊ ကမ်းနားလမ်းနှင့်၂၃လမ်းထောင့်၊လသာမြို့နယ်။
ဖုန်း – (95-1) 372 646, 372 655, 371 848
(၃) ရိုးမဘဏ် (Yoma Bank)
အမှတ် ၁၁/၁၇၊ ဘိုကလေးဈေးလမ်း၊ဗိုလ်တထောင်။
ဖုန်း – +95 1 373367, 373368, 373000
(၄) ဧရာဝတီဘဏ် (Aya Bank)
အမှတ်(၁) ဘုရင့်နောင်လမ်းမကြီး၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ လှိုင်မြို့နယ်။
ဖုန်း – 951-531067၊ 531068၊531069
(၅)ယူနိုက်တက်အမရာတက်အမရာဘဏ် (UAB Bank)
ဖုန်း – 01-8603009၊ 01-8603018
(၆) မြန်မာအရှေ့တိုင်းဘဏ် (Myanmar Orient Bank)
အမှတ်(၁၆၆/၁၆၈)၊ပန်းဆိုးတန်းလမ်း ၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်။
ဖုန်း – 01-246594
အတိုးနှုန်း 8.5% ပေးသောဘဏ်များ
(1) ပထမပုဂ္ဂလိကဘဏ် (First Private Bank)
အမှတ် – ၆၁၉/၆၂၁၊ ကုန်သည်လမ်းနှင့် ဗိုလ်ဆွန်ပက်လမ်းဒေါင့်၊ ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ်။
(2) ထွန်းစီးပွားရေးဘဏ် (Tun Commerical Bank)
အမှတ် ၂၃၀၊ ဗိုလ်မြတ်ထွန်းလမ်းနှင့်မဟာဗန္ဓုလလမ်းထောင်၊
ဖုန်း – 01-9000880
(၃) မြန်မာ့ရှေ့ဆောင်ဘဏ် (Myanmar Apex Bank) – (8.5%)
အမှတ် ၂၀၇၊ သိမ်ဖြူလမ်း၊ ဗိုလ်တထောင်။
ဖုန်း – 01 398811-19
(၄) ရွှေဘဏ် (Shwe Bank)
အမှတ် ၆၆/၇၆ ၊ကုန်သည်လမ်းနှင့်ပန်းဆိုးတန်းလမ်းထောင့်၊ကျောက်တံတား။
ဖုန်း – 01-2307901
(၅) ကမ္ဘာ့ရတနာဘဏ် (Global Treasure Bank)
အမှတ် ၆၅၃/၆၉၉၊ ကုန်သည်လမ်း၊ ပန်းဘဲတန်း။
ဖုန်း – 389365၊ 389489
အတိုးနှုန်း 8.6% ပေးသောဘဏ်
(၁) အာရှစိမ်းလန်းမှုဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ် (AGD Bank)
ဖုန်း – +95 1 239 9333
တစ်ချို့ဘဏ်တွေက ငွေစုဘဏ်အပ်ငွေကို အမျိုးအစားခွဲထားပါတယ်။ ဥပမာ – ဧရာဝတီဘဏ်ပါ။
သူ့မှာဆိုရင် (၁) ပုံမှန် Saving Deposit
(၂) Maximizer Saving (တစ်သိန်းကနေ စစုရသည်)
(၃) Loyal Saving (ငါးသိန်းကနေ စစုရသည်) ဆိုပြီးခွဲထားပြီး
တစ်လကိုအနည်းဆုံးဘယ်လောက်စုရမယ်လို့ သတ်မှတ်ထားကကာအတိုးပိုပေးသွားပါတယ်။တစ်ချို့ဘဏ်တွေကတော့ ထည့်သွင်းတဲ့ငွေများရင်အတိုးပိုများသွားတဲ့ ဘဏ်မျိုးပါ။ ဥပမာ – ယူနိုက်တက်အမရာဘဏ်ဆိုရင် စုငွေကငါးသိန်းငါးသိန်းအောက်ဆိုရင် အတိုး ၈.၂၅ ရာခိုင်နှုန်း၊ သိန်းတစ်ရာအောက်ဆိုရင် ၈.၃ ရာခိုင်နှုန်း၊ သိန်းငါးရာအောက်ဆိုရင်တော့ ၈.၅ ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ သိန်းငါးရာနဲ့အထက်ဆိုရင်တော့ ၈.၆ ရာခိုင်နှုန်းပေးပါတယ်။
ငွေစုဘဏ်စာရင်းကိုပိတ်လိုပါက ငွေစုဘဏ်စာရင်းစာအုပ်ကို မိမိစာရင်းဖွင့်လှစ်ထားသောဘဏ်ခွဲတွင် ပြန်လည်ပေးအပ်ပြီး အလွယ်တကူစာရင်းပိတ်နိုင်ပါတယ်။ အတိုးနှင့် တကွ စာရင်း လက်ကျန်ငွေများကိုဘဏ်က ထုတ်ပေးမှာပါ။